Shina: Lany andro ny bilaogy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2019 4:21 GMT
Hotontosaina amin'ny 15-16 novambra ao Guangzhou, Shina ny fihaonamben'ny bilaogera Shinoa faha-4.
Na dia izany aza, tamin'ny taon-dasa, misy ny adihevitra mitohy ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Shinoa mikasika ny hoe maty sa tsia ny kolontsaina bilaogy. Ankoatra izay, vao haingana ny bokee.com sy blogchina.com, BSPs roa voalohany indrindra natsangan'i Fang dong-xing (solon'anarana mpialoha lalana tamin'ny bilaogy) ao Shina no tafiditra anaty olana ara-barotra. Mitady fampiasam-bola hamadika ny tranonkala ho seha-piarahamonina media marolafy i Fang.
Tamin'ny volana jolay, nanambara i Maitian, bilaogera mavitrika fa lany daty ny fibilaogina ary nanapa-kevitra hivadika ao amin'ny tranonkala tambajotra sosialy izy mba hifandraisana amin'ny namany.
Amin'ny maha bilaogera mavitrika ahy, tao anatin'ny telo taona lasa, nanizingizina hanavao ny bilaogiko “Maitians's reading life” saika isan-kerinandro aho. Mampihatra ny modely “me the media (izaho media)” aho ary manohy manoratra momba ny fiarahamonina sy ny orinasan'ny aterineto. Nanome laza ahy sy fitsidihana tena betsaka izany bilaogy izany. Na izany aza, mandinika mafy aho raha tokony hakatona ity bilaogy ity.
Satria efa lany andro ny bilaogy..
Ankoatra ny hoe resin'ny orinasan'ny aterineto, tahaka ny SINA ny ankamaroan'ny sehatra famahanam-bilaogy tsy miankina, mahita ilay bilaogera fa tsy afaka mifaninana amin'ny fitaovana hafa, toy ny QQ ny endrika fifandraisana amin'ny bilaogy. Na izany aza, ny fanamby lehibe indrindra dia ny firongatry ny SNS.
Ankehitriny dia mahatsapa aho fa ny SNS, atolotry ny Facebook, no fiafaran'ny bilaogy – ny SNS, rehefa ampitahaina amin'ny fomba fiasan'ny “media” sy ny “ifanatrehana” dia mahomby lavitra noho ny bilaogy. Raha milaza isika fa manome feo tsy miankina ho an'ny mpiserasera ny bilaogy, ny SNS kosa hanatanteraka ny hevitry ny “inter-subjectivité” eo amin'ny mpiserasera.
Ankoatra ny fanoratana ity lahatsoratra ity, nijanona tamin'ny fanoratana tao amin'ny bilaoginy ilay bilaogera ary nifindra tany amin'ny SNS telo hafa. Na dia izany aza, notononina matetika ho manazava ny olana ara-barotra vao haingana ao amin'ny BSP ao Shina ny lahatsorany.
William long, bilaogera teknolojia malaza, nanondro ilay lahatsoratra ihany koa mba haneho hevitra momba ny fanjavonan'ireo tolotra maro hafa momba ny blaogy, toy ny fanangonam-baovao BSP sy RSS ao Shina:
Ny zavatra hitanay dia manjavona tsikelikely ny BSP sy ireo tolotra mifandraika amin'ny bilaogy, nandao ny andro volamenany ny bilaogy ary nandeha tanaty hoavy maizina. Ny antony lehibe dia satria tsy mety hahazoana tombombarotra ireo tolotra manodidina ny bilaogy.
Nahoana no tsy mahazo tombombarotra izy ireo? Ny hatsaràn'ny votoatin'ny bilaogy dia tsara kokoa noho ny SNS, Twitter ary Digg, avo lenta ny mpamaky azy. Tokony hahazo fidiram-bola avy amin'ny dokam-barotra izy ireo. Na eo aza izany, amin'izao fotoana izao, tsy dia misy loatra ny fidiram-bolan'ny bilaogera. Amin'ny ankapobeny, miankina amin'ny Google AdSense izy ireo. Izay midika fa misy lasan'ny Google ny tombombarotr'y ry zareo.
Rehefa niditra ny sehatra ny Google, dia namolavola fitaovana fibilaogina goavana marobe, toy ny google reader, feedburner, blogsearch, sns … izay nanimba ny nofinofin'ny BSP amin'ny fidiram-bola ary manana sata ampihimamba amin'ny tsena ny google.
Na dia izany aza, manantena kokoa ny hoavin'ny bilaogy izy ary tsy miombon-kevitra fa hosoloan'ny SNS ny bilaogy:
Misokatra kokoa sy manokana kokoa ny bilaogy, ambony kokoa ny kalitaony. Mikatona kokoa ny SNS, indrindra manoloana ny milina fikarohana. Mifanohitra amin'ny fisokafan'ny bilaogy izany ary misy fiantraikany amin'ny fampielezam-baovao. Tena sarotra haely amin'ny SNS ny lahatsoratra tsara. Ankehitriny, maka tahaka facebook ny ankamaroan'ny SNS any Shina, izay fara-vahaolana. Ny SNS tsara indrindra dia ny QQ an'ny Tencent, saingy tsy mahita fitoviana eo amin'ny QQ sy ny facebook ianao. Ny zavatra mahatsikaiky dia tsy nanambara mihitsy ny Tencent fa SNS.
Namintina ilay bilaogera fa tsy fiafaran'ny bilaogy ny tsy fahombiazan'ny BSP sy ny tolotra hafa momba ny bilaogy, etsy ankilany, afaka manangana bilaogy mahaleotena manokana ny bilaogera.
Andao hiandry ary hijery izay horesahan'ireo bilaogera Shinoa momba izany ao amin'ny fihaonamben'ny bilaogera Shinoa atsy ho atsy.